सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको दादागिरीविरुद्ध प्रेस युनियनले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति ! (बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठसहित)
ARCHIVE, COVER STORY, MEDIA » सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको दादागिरीविरुद्ध प्रेस युनियनले निकाल्यो यस्तो बिज्ञप्ति ! (बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठसहित)
काठमाडौँ- नेपाल टेलिभिजनमा बिगत १२ बर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रम सिधा प्रश्न ? संचारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाको ठाडो निर्देशनमा बन्द गरिएको विषयमा प्रेस युनियनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिन अघि सोही कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले लाइभ अन्तर्वार्ता दिंदा झुट् बोलेको कुरा सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएपछि रिसाएर उक्त गलत कदम चालेपछि त्यस कार्यको भ्रत्सना गर्दै युनियनले बिज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
यस्तो छ बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ